Maninona no maimbo tahaka ny pataloha ny ahitra? - Ity no mila fantatrao.
Vavaky ny fofona maintso?
Te hahazo fahazoan-dàlana ve ianao?
Fa maninona no maimbo ny fofona manitra?
Nasiaka ny Internet izahay hamaliana ny fanontaniana: NAHOANA IANAO NO CANNABIS SMELL NO MISY TOKOA? Izany no mitondra antsika mankany amin'ilay lehilahy, angano sy angano mampitombo ny fihenan-tsakafo, Kevin Jodrey, izay namela anay fanazavana teo amin'ny pejy quora izay nanaparitahany fa ny Thiols no mahatonga ny fofona, fa amin'ny ahi-dratsy kosa dia misy fofona manitra avy amin'ny lohan'ny terpenes sy esters - ny bakteria sy ny anzima dia manampy azy ireo hivadika ho thiols, izay mitambatra sy mahatonga ny fofona ahi-dratsy. Ity ambany ity ny lahatsorany ary manazava bebe kokoa ihany koa izahay momba ny antony ahafahan'ny rongony sasany mamofona skunky, izay ankafizin'ny olona sasany. Ary na Skunk # 1 aza dia nomena anarana ho an'ny fofona.
Inona ny fofona terpenes tahaka ny Skunk?
Misy mihoatra ny 100 terpenes ao anaty voninkazo rongony fantatrao sy tianao. Androany isika dia hifantoka amin'ireo izay mety ho fofona ao ambadiky ny fofona mavesatra an'ny karazana rongony sasany.
Ny Myrcene no terpene be indrindra amin'ny voninkazo rongony - mahatratra ny antsasaky ny profil terpene amin'ny karazana sasany. Ohatra, Skunk XL manana myrcene be dia be ao ary maimbo… tsara, skunky. Myrcene dia manana fofona musky sy etona izay mety hanampy amin'ny fanazavana ny antony mahatonga ny ahidratsy hanana fofona toy ny skunk.
Alpha-pinene sy Beta-pinene
Alao sary an-tsaina ny fandehanana any anaty ala kesika ary miaina fofonaina lalina amin'ny oronao, izany dia pinene izay manimbolo anao. Izy io dia terpene mahazatra amin'ny rongony ary iray amin'ireo Alika an'ny polisy terpenes dia miofana hamantatra raha manana ahi-dratsy ny olona voarohirohy.
Pinene dia hita ao anaty hainganana toy Island Sweet Skunk, Fambolena cresco Labs fantatra noho ny fametahana ny fofona voankazo, toy ny famonosam-bary, ny hanomezana vokatra manandratra kokoa.
Ity terpene ity dia hita ao anaty hajan'ny Island Sweet Skunk, fa manitra toy ny menaka hazo, jasmine, na voasarimakirana ihany izy ity. Ireo fofona manintona ireo dia mety mifandraika amin'ny fofona skunky izay ain'ny zavamaniry cannabis.
Linalool dia terpene izay maheno fofona lavender, saingy mety hita ihany koa hoe maninona ny fofona ahidratsy sasany no maimbo - misy thiol mifamatotra ao aminy. Ny thiols dia singa voajanahary misy solifara izay noresahin'i Kevin Jordey etsy ambony. Rehefa vaky ny terpene ka lasa thiols, dia zavatra simika mitovy avy amin'ny skunk sy fofona, skunky ihany. Ny karazana rongony malaza izay avo ao Linalool dia Volomparasy Dadabe (na GDP).
Ity no antony Marijuana indraindray dia toa mitsoka
Efa nanontany tena ve ianao hoe maninona ny fofona rongony toy ny pataloha?
Betsaka ny fanazavana isan-karazany, fa ny iray amin'ireo marimarina kokoa dia ny marijuana dia misy akora mitovy amin'ny fofon'ny skunk. Mahatsikaritra izany amin'ny fotoana maro isan-karazany amin'ny fanjifana vilany izay mety efa nanjo anao, ary mbola io ny zavatra anontanian'ny olona momba ny marijuana.
Noho izany, maninona no mihanaka ny mariana?
Izany dia noho ny rongony terpenes izay matetika no hita ao amin'ny tahirin-tsakafo rehetra. Tsy maninona na Indica na Sativa izay safidinao hividianana, dia tsy isalasalana fa hisy terpene sasany izay mipoitra mamy. Indraindray, ny fofona dia sarotra hoentina, ka izany no mahatonga ny olona misafidy karazana hafa karazana, ary indraindray, mandanjalanja ny habetsan'ny cannabis terpenes, ka tsy hanahirana anao ny mandany rongony.
Amin'ny tranga roa ireo dia ho hitanao ny fofon'ny potika raha mihinana azy io ianao. Ity dia avy amin'ny mason-tsivily mariana amin'ny zavamaniry cannabis, ary ny isan'ireo akora ireo dia tsy mitovy amin'ny tsiranoka cannabis iray hafa.
Ahoana no hisorohana ny mariage rongony Skunky?
Mba hisorohana ny singa maimbo sy maloka ao anaty karazana dia tokony handeha amin'ireo karazana rongony izay maimbo mahafinaritra kokoa ianao. Hafa mihitsy ny skunk sy ny marijuana, ary raha te hihinana marijuana madio sy mahafinaritra ianao, dia tsy maintsy mividy ny karazana tadiny mety. Tehirizo tsara koa ny rongonyo mba hisorohana ny terpenes sy ny esters tsy hivadika ho thiols mety misy fofona maimbo.
Izany dia mitondra antsika amin'ny karazany maro fiovaovan'ny fihenjanana izay tsy dia maimbo ary misy fiantraikany amintsika. Ireto ny sasany amin'ireto:
Amin'ny lafiny mifanohitra, manana fofona mahery kokoa isika, ary arak'izany, ny mamofona kokoa. Ireo dia:
Ireo karazana fihenam-bidy sy otrikaretina miady amin'ny rongony ity dia manintona eny an-tsena, saingy samy hafa karazana ny marijuana amin'ny endriny sy ny vokatr'izy ireo.
Vokatr'izany dia samy manana fofona sy hanitra samy hafa azo avy amin'itony ireo isika.
Ahoana ny fisafidianana ny marijuana ho anao?
Afaka mandeha amin'ny saina tsotra ianao. Raha toa ka tsy dia zakanao ihany ny vatanao sasany, ialao ilay izy ary mandehana milay mahafinaritra kokoa. Ny vatan-drongony sasantsasany dia mahery kokoa amin'ny fihetsik'izy ireo miaraka amin'ireo singa hafa ao anaty vilany, ka izay no antony ahitanao ny fahasamihafan'ny fofona tamin'ny fanombohana ny fifohana sigara, ary ny faran'ny fanjifana. Mba hampahazava ny zava-drehetra dia tokony handeha amin'ny fantsom-panintonana tena mahaliana anao ianao.
Tonga amin'ny endriny maro samihafa ny ahi-dratsy?
Ny ahitra, na ny rongony, na ny vilany, samy hafa karazana, dia ny Skunk no tena manitra. Araka ny lazain'ny anarana, Skunk dia fiovan'ny rongony mahery vaika izay matanjaka ary misy fatra amin'ny fanjifana.
Raha te hanandrana Skunk ianao dia tsara indrindra aloha ny manandrana rongony sy ny fiovan'ny mahazatra. Raha hitanao fa misy fanamby sarotra tanterahina, dia ho ratsy kokoa aza ny Skunk.
Inona ny karazana rongony misy menaka tsara indrindra?
Manandrama ahitanao ny fiovana marijuana izay manintona anao indrindra ary mandehana amin'ny vahaolana tsy dia manitra loatra.
Hitanao amin'ireo karazana fiovana ireo eo amin'ny tsena maro samihafa. Iray amin'ireo mahafa-po indrindra ny Trainwreck, izay iray amin'ireo zotra tsara indrindra koa amin'ny fiatrehana ny toe-pahasalamana samihafa. Avy amin'ny endrika fofona manitra mamy nefa mahafinaritra nefa mamoha rehefa mifoka ny vilany ianao.
Ny fiaran-dalamby irery no tsy safidy. Ianao koa manana fisafidianana ny fofona G13, ny zava-manitra Granddaddy Purple, sy ny fiovan'ny marijuana koa maro hafa izay manome refy tokana amin'ny fanjifana vilany.
Ahoana no ahafahanao mahazo antoka fa nifidy ny aroma mety ianao?
Ny tsiranoka cannabis dia tonga amin'ny hanitra samy hafa, ary raha mahita ianao izay mahafinaritra anao indrindra dia toe-javatra fandresena. Tsy maninona ny halehiben'ny tianao ho azo, na ny haingana haingana tianao ny hahatsikaritra ny vokatra rongony, manome ny tenanao ny fitsaboana marina.
Ilaina ny manome ny olona amin'ny lalotra amin'ny fihenan-tsakafo. Izany no antony mahatonga ny orinasa maro manandrana tetikady isan-karazany mba hanambatra ny fofona sy ny tsy dia mahazatra, izany no mahatonga ny mpanjifa rongony maro be.
Hahazo “avo kokoa” ve ianao amin'ny mariage rongony Skunky?
Tsia. Ny hanitra Skunky dia skunkier ihany. Ary tena feno fofona kokoa. Raha tianao ny manitra ireto dia be ny safidy, ary azonao atao ny mandray ilay vilany marijuana izay tena mahafaly anao.
Amin'ny tranga hafa dia afaka mandeha amin'ny fantsom-bary cannabis izay manitra fofona anao kokoa ianao, mba hahafahanao mankafy tanteraka ny vilaninao. Raha mahita tombontsoa ara-pitsaboana koa ao ianao, dia tsara kokoa ny fahafinaretana.
Fa maninona ny fofona rongony toy ny pataloha, ary ny fomba hisafidianana ny hanitra kely tsy misy fatiantoka dia ilay safidinao sy ny fotoanao ho an'ny fantsom-pisakafoanana rongony mety hanitra ankasitrahana.